Gacmo gashi iyo sanduuqyo dab-damis ah, taasi waa sida Samsung ay kuu weydiineyso inaad soo celiso Qoraalkaaga 7 | Wararka IPhone
Galoofyada dabka iyo sanduuqyada aan dabka lahayn, taasi waa sida Samsung ay kuu weydiineyso inaad soo celiso Galaxy Note 7
Samsung waxay "Kits Return" u diraysaa isticmaaleyaasha iyo falanqeeyayaasha soo celinaya aaladooda Galaxy Note 7Haa, waxaan ka hadlaynaa aaladdaas oo suuragalnimadeeda ah inuu dhammaado qarxintu ay aad u sarreyso. Inqilaabkan waxaa siisay shirkadda Samsung lafteeda, waana inaysan si fiican u qaban aaladda, sidoo kalena aysan si fiican u fulinin barnaamijka beddelka, tan iyo markii loo maleynayay in Galaxy Note 7 oo halista ka baxsan ay sidoo kale qaraxday. Si loo xaliyo dhibaatooyinka loona baajiyo qaraxyo badan, Samsung waxay go'aansatay inay ku dhaqaaqdo "aruurinta" aaladaha, tanna waxay u dirtaa dadka isticmaala agabkan oo ah kuwa caadiga ah ee NASA marka loo eego shirkadaha macaamiisha elektaroonigga ah.
Qalabku wuxuu ka kooban yahay galoofyo ololleynaya, sanduuqa ololka celiya, iyo tilmaamaha xirmooyinka. Sidan oo kale, adeegsadayaashu waa inay soo bandhigaan aaladda la damiyay sanduuqyada u dhigma oo loo sii gudbiyo shixnadda Samsung si dib loogu warshadeeyo, haddii ay u aragto inay taam tahay. Dabcan, Waxay noqon laheyd dhibaato haddii dhowr ka mid ah aaladahaan ay bilaabaan inay ku gubtaan gaadiid buuxaTaasi waa sababta sanduuqyadan ay yihiin kuwo gaar ah. Marka, inyar oo ka mid ah Samsung ayaa soo kabanaysa Samsung Galaxy Note 7, oo aan shaki ka qabin inay si wanaagsan u adeegsan doonto, waxaan qiyaaseynaa inay ka faa'iideysan doonaan shaashadda iyo boorarka loogu talagalay moodooyinka kale, maadaama dhibaatada dhabta ah ay tahay batteriga iyo isku xirnaanta isku mid ah.
Kooxda Soosaarayaasha XDA, oo ku takhasusay tikniyoolajiyadda ku shaqeeya Android, ayaa soo duubay fiidiyoow in aan qaadan karno xoogaa maad ah, taas oo ay ku muujinayaan waxa ku jira iyo nidaamka looga takhaluso qalabka. Haddii aad na aqriso, oo aad isticmaasho Samsung Galaxy Note 7, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad laxirxirto Samsung oo aad udhacdo qaabkii laguugu talagalay, adigoo iska ilaalinaya inaad naftaada iyo kuwa kugu xeeranba aad qatar geliso Ha seegin fiidiyowga aan ka tagnay kor uun, ma kaa tegayo dan la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Galoofyada dabka iyo sanduuqyada aan dabka lahayn, taasi waa sida Samsung ay kuu weydiineyso inaad soo celiso Galaxy Note 7
Pokémon GO waxaa lagu casriyeeyay gunooyin ugaarsi iyo tababar jimicsi fudud
Apple Watch waa midka ugu saxan ee suuqa lagu xirto